Malayzia: Nohadihadiana ilay mpiangaly Rap tao amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Malayzia: Nohadihadiana ilay mpiangaly Rap tao amin'ny YouTube
Voadika ny 21 Janoary 2019 4:44 GMT
Nohadihadian'ny polisy momba ny hirany rap, izay nanasongadina ny hiram-pirenena Maleziana “Negaraku”, tao amin'ny feo lafika i Wee Meng Chee, fantatra amin'ny anarana hoe Namewee. Niteraka resabe tamin'ny taon-dasa (2007) ity hira ity izay mitondra ny lohateny hoe ‘Negarakuku’, ahitana tononkira Shinoa milaza ny fanararaotan'ny polisy, ny kolikoly ary ny fanavakavahana ara-poko, ankoatra ny maro hafa. Navoaka tao amin'ny Youtube tamin'ny herintaona (2007) ny lahatsarin'i Wee amin'ny ‘ Negarakuku‘ ary nahasarika mpijery maherin'ny iray tapitrisa.
Araka ny voalazan'i Wee, nanontany azy momba ilay hira ny polisy sy ny tanjony tamin'ny fanatontosana ilay lahatsary. Na dia nilaza tamin'ireo mpitati-baovao aza izy fa nilaza taminy ny polisy fa ho hakaton'izy ireo ny lahatahiry misy ity hira ity dia voalaza fa nohadihadiana araka ny Lalànan'ny Fisarahambazana i Wee, ary ho entina eo anatrehan'ny Lefitry Mpampanoa Lalàna ny raharaha. Niala tsiny ampahibemaso noho ilay lahatsary i Wee ny taon-dasa (2007) rehefa nipoitra ny hatezerana voalohany.
Nampiasaina tamin'ny mpikatroka an-tserasera roa hafa tamin'ity taona ity (2008) ny Lalànan'ny Fampisarahambazana , Raja Petra Kamaruddin , izay nigadra an-tranomaizina roa taona tsy nisy fitsarana, sy ilay bilaogera Syed Azidi Syed Aziz ihany koa. Nohadihadiana araka ny Lalànan'ny Fisarahambazana ihany koa ny bilaogera iray hafa, Abdul Rashi Abu Bakar, na dia tsy nisy aza ny fivoaram-baovao hatramin'ny nanaovana tatitra ato.
Nitranga tao anatin'ny tsy fahamarinan-toerana ara-politika sy ara-toekarena tao amin'ny firenena ireo dingana nataon'ireo manampahefana hamehezana ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera, raha mikatsaka ny hahazo ny fahefan'ny fitondrana fiaraha-mitantana izay teo amin'ny fitondrana nandritra ny 50 taona mahery kosa ny vondrona fiaraha-mientan'ny mpanohitra vao niforona.